नयाँ सरकारको जोड/घटाउ पेचिलो, कसरी बन्छन् देउवा प्रधानमन्त्री? खबरमञ्च
३० बैशाख, खबरमञ्च, at 7:40 AM
By खबर मञ्च / May 13, 2021 / Comments Off on नयाँ सरकारको जोड/घटाउ पेचिलो, कसरी बन्छन् देउवा प्रधानमन्त्री?
एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका २८ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सांसद रहे पनि नेपाल पक्षका नेताले मत नदिँदा ओलीले ९३ मतमै चित्त बुझाउनुप&yen;यो ।
ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने २८ सांसदलाई कारबाहीको डन्डा चलाउन सकेका छैनन् । कारबाही गरेमा सांसद संख्या घट्ने र देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न बाटो सहज हुने देखेरै ओलीले उनीहरूलाई कारबाही नगरेको राजनीतिक विज्ञ विश्लेषण गर्छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
Published: 1 month ago on May 13, 2021
Last Modified: May 13, 2021 @ 11:58 am
ओली र नेपालबीच के सहमति भयो चपली हाइटमा ?